Iyo Apple Watch inotengesa zvinopfuura iyo yese yeSwitzerland wachi indasitiri | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inotengesa zvinopfuura iyo yese yeSwitzerland wachi indasitiri
Apple payakaunza zviri pamutemo Apple Watch, mamwe makambani echinyakare, akadai seSwitzerland, vakaisa kuchema kudenga kutaura kuti seApple yakanga yapinda mumunda iyo yaisina ruzivo. Ivo vaive pachena vachiziva kuti iyo Apple Watch yaive yakatenderera chigadzirwa uye kuti nekukurumidza kana gare gare zvaizovakanganisa.
Makore mana aifanira kupfuura kune iyo indasitiri yekutarisa yeSwitzerland kuti ione kuti Apple Watch yakava sei mukwikwidzi wayo mukuru wekurova. Munguva ya2019, Apple yakatumira mamirioni makumi manomwe neshanu Apple Watch yemamiriyoni makumi maviri nerimwe ezviuru zveindasitiri yekutarisa. Uye uku kungori kutanga, nekuti maitiro anoita kunge asiri kuchinja.
Izvo zvinoita sekunge hazvichinje, nekuti zviri kuwedzera kuwanda kuona kuti vashandisi vewadhi dzetsika vari kutanga kutora smartwatches semawachi, wachi iyo inovapawo iwo akateedzana e mabasa asingazombowanikwa mumawadhi echinyakare. Iyo Apple Watch ndiyo modhi inofanira kuteverwa nevese vagadziri, asi kwete iyo yega yakavhura musuwo wekuSwitzerland indasitiri yekutarisa kuti ifungezve kwekutungamira nhanho dzayo.
Kunyange chiri chokwadi kuti mamwe emakambani akadai sa TAG Heuer, Tissot neSwiss pachayo akatanga mhando dzakasiyana dzinotarisirwa ne Wear OS, iyi nkana zvinoita senge chaicho sarudzo kune vashandisi vari kutsvaga yakadaro yakazara smartwatch, sezvingave zvirizvo zvese neApple Watch uye mamodheru ayo Samsung anoita kuti iwanikwe kwatiri.
Zvinoenderana neChirongwa Chekuongorora, vadiki vatengi vari kuda smartwatches kuvapa mamwe maficha pane kungotarisa panguva yacho, nepo mawadhi echinyakare achakakurumbira nevashandisi vekare. Kuti unyatso kusvika rudzi urwu rwevateereri, Apple yakaunza iyo yekudonha detector neiyo Series 4, yekudonha detector iyo otomatiki anotarisira kuchengetedza runhare kune ve emergency mabasa pavanoona kudonha, zvinokodzera iyo redundancy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple Watch inotengesa zvinopfuura iyo yese yeSwitzerland wachi indasitiri
Hazvizivikanwe kana Apple ichavhurazve zvitoro zvayo zveChina muna Kukadzi 10.